Q: Ungabathola kanjani ukuqinisekisa Quality Okuhle esasithola?
A: Okokuqala, Sine umnyango QC ukulawula Quality asendabeni Raw kuze imikhiqizo isiqedile. Okwesibili, Sizokwenza Inpsection ngesikhathi ukukhiqizwa futhi emva Production. Okwesithathu, uzobe Yonke imikhiqizo yethu evivinywa phambi ukupakisha futhi ethuma. Sizothumela Ukuhlolwa noma ukuhlolwa isiqophi uma ikhasimende angizi sokuhlola personly.
Q: Kuthiwani warrenty?
A: Zonke Imikhiqizo yethu kokuba unyaka 1 warrenty ne Life-Long inkonzo Yesondlo. Sizokwenza ukukunikeza khulula technical support.
Q: Ingabe ukunikeza noma iluphi usizo mayelana Imikhiqizo Ukusebenza?
A: Zonke imishini ngaphakathi kwemikhiqizo isingeniso, Manuals ngesiNgisi esasiwubuhlobo zonke iziphakamiso ukusebenza futhi Ukulungisa iziphakamiso phakathi usebenzisa. Phakathi naleso sikhathi, Eminye imibuzo esingazibuza shoka you ngenye indlela, Njengazo ukukunikeza Isiqophi, Bonisa ngikufundise khashana you are bo ifektri noma Onjiniyela bethu yemboni yakho yethu uma iceliwe.
Q: Ngingathola Izingxenye elingasebenzi?
A: Sizokwenza buyela ezinye okusheshayo bafake izingxenye nge-oda lakho, kanye ezinye amathuluzi adingekayo kulo mshini okuyinto khulula kuzothunyelwa ndawonye wtih oda lakho ebhokisini ithuluzi. Sinazo zonke izingxenye ezisele umdwebo ngaphakathi Manual nge uhlu. Ungase nje usitshele ezisele yakho izingxenye No. esizayo. Asikwazanga ukukusekela yonke indlela. Ngaphezu kwalokho, i-beveling umshini bezihlahla amathuluzi wotho futhi Ifaka, Kuyinto uhlobo comsumable yemishini. It njalo ucele brand njalo okungaba easyly ukuthola ezimakethe zendawo emhlabeni wonke.
U: Yini Delivery lakho Usuku?
A: Kuthatha izinsuku ezingu-5-15 onobuhle ejwayelekile. Futhi izinsuku 25-60 for umshini ngezifiso.
Q: Ngingathola imininingwane ethe xaxa ngalo mshini noma silimars?
A: Pls ukubhala phansi imibuzo yakho kanye nokudingekile ngezansi nophenyo ibhokisi. Sizokwenza hlola futhi uphendule wena nge-imeyili noma Ifoni e Emahoreni angu-8.